Ama-Strawberries | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
I-Agrotechnics yokulinywa anyanisi: imithetho yokutshala nokunakekelwa
Esikhathini sethu sezulu, u-anyanisi utshalwe iminyaka emibili. Ngonyaka wokuqala bahlwanyela imbewu - chernushka. I-anyanisi sevok ikhula ekwindla kusukela kulezi zinhlanzi, kanti entwasahlobo yonyaka ozayo itshalwe emibhedeni. Kuzo ama-bul amakhulu akhula ekwindla. Anyanisi yisitshalo esidumile semifino emazweni amaningi emhlabeni. Ikhulile isikhathi eside futhi isetshenziselwa imithi yendabuko nokupheka.
The okumnandi kunazo sitrobheli izinhlobo
Good strawberry! Ngenjabulo, wonke umuntu uyidla, kokubili izingane kanye nabantu abadala. Ama-berries amnandi kangaka, ngezinye izikhathi ngobuhlungu obuncane, ngaphandle kokunambitheka kwawo okuthakazelisayo, nawo ayasebenza kakhulu - aqukethe amavithamini amaningi namaminerali, iron, potassium, ithusi, i-magnesium, i-manganese. I-Lemon ingaphansi kokuqukethwe kwevithamini C.
Ama-Strawberries Ukufaneleka nokunakekelwa okufanelekile
Ukulungiselela inhlabathi yokutshala ama-strawberry Ama-strawberries akhula endaweni eyodwa iminyaka eminingana ngokulandelana. Ukulungiswa komhlaba kudinga ukunakwa okukhethekile, ngoba isivuno samajikijolo sincike ekulungiseni kwangaphambili. Okokuqala udinga ukukhetha isayithi. Kumele kube indawo ehlala phansi, enelanga elihle. Ngempela, ngenxa yokungabi nelanga lokukhanya kwelanga, kuyoba nokuvunwa okubi kwama-strawberries.
Strawberry ezihlukahlukene "Gigantella"
Abalimi abaqeqeshiwe ngonyaka ngamunye balwela ukwehlukanisa izitshalo zabo, "ezihlala" ezihlotsheni zabo. Ngakho-ke, laba bantu bahlale befuna izinhlobo ezintsha zezitshalo ezihlukahlukene ezizokwazi ukunikeza isivuno esihle kakhulu, futhi, ngaphezu kwalokho, izithelo ezinhle kakhulu. Ngokuqondene nama-strawberries, ummeleli obaluleke kunazo zonke kule berry yizinto ezihlukahlukene "iGigantella".
Ezihlukahlukene strawberries "Albion"
Kunzima namhlanje ukuthola umuntu ongayikuzama ama-strawberries empilweni yakhe. Igama lesibili laleli lidakamizwa yi-strawberries engadini. Kungakhathaliseki ukuthi kunzima kanjani ukukhula lokhu noma uhlobo lolo berry, abantu ngonyaka ngamunye bafaka izitshalo ezikhona, noma baphonsa ama-saplings amasha. Okuthandwa kakhulu yizo izinhlobo, amajikijolo afinyelela ubukhulu obukhulu futhi anambitha kakhulu.
Izinhlobonhlobo ze-strawberry "iNdlovukazi u-Elizabeth
I-strawberry ingenye yezinhlobonhlobo ezidumile kakhulu kokubili izingane kanye nabantu abadala. Ukubukeka kwala majikijolo abomvu kufanekisela ukuqala kwehlobo, amaholide kanye nezinsuku. Naphezu kokuthi kwezinye izitolo lo mkhiqizo ungathengwa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, iningi labantu liyaqonda ukuthi lokhu akusiyo i-strawberry, kodwa umphumela wembonini yamakhemikhali.
Indlela yokutshala ama-strawberries ngaphansi kokumboza impahla
Kulesi sihloko, sizocabangela ukutshala ama-strawberries ngaphansi kokumboza impahla, ukukhomba izinhlangothi ezinhle nezinhle zalendlela, ukutshela ukuthi ungayenza kanjani nokuthi uzobiza kangakanani. Sifunda ukwandisa ukukhiqiza uma usebenzisa izinto zokuhlanganisa. Uyazi? I-strawberry igama elidumile lezitshalo nezitshalo eziluhlaza okwesibhakabhaka.
"U-Elizabeth 2", imithetho yokutshala nokunakekela iberry yasebukhosini
Berry sitrobheli ethandwa abaningi. Kunezinhlobo eziningi zezitshalo, ngasinye esinezici zayo siqu: ukunambitheka, ukubukeka, isivuno. Uhlobo lwe-strawberry Elizabethe 2 lukhethwa ngabalimi abaningi, futhi lokhu kubangelwa izimfanelo zayo. Uyazi? Abalimi bezolimo kanye nabalimi bakha izithelo ezihlukahlukene zika-Elizabeth 2 ngenxa yokuthi amajikijolo awo ahanjiswa kahle futhi agcinwa.
Izinhlobonhlobo ezidume kakhulu ze-sitrobheli ezomile-kancane kanye nesitrobheli
Ama-Strawberries ayinhlangano ebhekwayo ewusizo futhi enhle, ethandwa kakhulu yizingane kanye nabantu abadala. Ukuze ujabulele ukunambitheka kwayo, akusekho isidingo sokuqeda amahlathi ngokufuna ama-glades afihlekile, ngoba ama-strawberries angakhula ekhaya. Uhlobo oluthandwa kakhulu lwe-sitrobheli yi-bezusaya ehamba phambili, izinhlobo ezinhle kunazo zonke ezihlukahlukene ezibonakalayo eziwusizo.
Indlela yokubhekana nezinambuzane ze-sitrobheli
Uma ucabanga ukuthi izinto eziphilayo kuphela ezidinga ukuvikelwa, khona-ke akunjalo. Sonke sithanda le berry - ama-strawberries, kodwa ukuze sifinyelele etafuleni lethu iphephile futhi sizwakala, udinga ukuvikela ama-strawberry kusuka ezinambuzane. Ngalokhu sizokusiza ukuthi uyithole. Indlela yokubhekana ne-sitrobheli mite Enye yezinambuzane eziyingozi kakhulu ze-strawberry yi-strawberry mite.
Ukunakekelwa kahle kwe-strawberries ngemuva kokuvuna
Yonke insimu ifuna ukuthola ama-strawberry amnandi, amancane namanzi ngenkathi. Futhi yisikhathi sokunakekela isivuno esizayo ngemva kokuvuna. Ukunakekela iberry elimnandi kuyinkqubo ende, cishe yonke inkathi, kodwa njengoba bezwa ukunakekelwa kwensimu, ama-strawberries awaqedi ukuyivuza ngokuvuna okukhululekile.
Indlela yokunakekela ama-strawberries phakathi nezimbali, amathiphu amahle kakhulu
Wonke umuntu uyazi amajikijolo abomvu, amnandi, anamanzi abizwa ngokuthi ama-strawberries. Ukuze uthole isivuno esihle esigcwele, udinga ukuhlinzeka ukunakekelwa okusezingeni eliphezulu hhayi kuphela ngenkathi ekhulayo esebenzayo, kodwa nangesikhathi sokuqhakaza. Ukunakekelwa kwe-strawberry ukunisela, ukuncelisa, ukuhlanza ukhula, ukuhlanza amadevu nokulwela inhlabathi nxazonke ezihlahleni.
Konke mayelana nokutshala ama-strawberries entwasahlobo: nini, kanjani futhi kanjani ukutshala ama-strawberries entwasahlobo
Kungaba nzima ukuthola umuntu ongathandi i-strawberries enomnandi, enomsindo futhi enamnandi. Bahlakulela lesi simangaliso ezindaweni ezihlukahlukene kakhulu zezulu, ezindaweni ezihlukene, ngenkathi zisebenzisa ama-agrotechnical ahlukahlukene. Kodwa-ke, bambalwa abazi ukuthi kufanele kube njani umanyolo we-strawberries, okwenziwa entwasahlobo.
Strawberry "Masha": izici ze-agrotechnology ezihlukahlukene nokulima
Ama-strawberries cishe omunye amajikijolo athandwa kakhulu nabathandayo abalimi. Abantu abaningi bangathanda ukuthola izici eziphakeme kakhulu kwisayithi yabo: amajikijolo amakhulu, ukuvinjelwa kwezifo eziphezulu, ukunakekelwa okungahloniphekile nokuvunwa okuhle. Ngenye yalezi zinhlobonhlobo sizoxoxa kule ngxenye.
Imithetho yokutshala nokunakekela ama-strawberries "Usayizi waseRussia"
Noma ubani onendawo yakhe siqu ngokuvamile usibheka njengesinqumo esifanele sokutshala ama-strawberries kuso. Сочные красные ягоды одинаково любят как дети, так и взрослые, а самым любимым сортом клубники у отечественных растениеводов считается "Русский размер", являющийся крупноягодным гибридом садовой земляники.
Izinhlobonhlobo ezinhle ze-strawberries amakhulu
Ama-Strawberries noma ama-strawberries engadini aphunga futhi anamanzi, athambile futhi athandwa yiwo wonke umuntu kusukela komncane kuya komdala. Kunzima ukuhlangana nomuntu ongathandi ama-strawberries efomu elisha noma e-dessert, nakwabo abavuna izitshalo endaweni yabo, bafuna ukuthi kube njalo futhi kube nkulu. "Izinhlobo ze-Gigantella" eziphakathi nonyaka ze-strawberries ezinkulu, ezavela ngemizamo yabalimi baseDashi.
Izinhlobonhlobo zezitshalo "Nkosi": ukulingana okulungile nezici zokunakekelwa
Abasimili bevame ukungathokozi ngezinhlobo zezitshalo zasensimu. Kodwa-ke, kaningi labo ngokwabo bayecala ngokungawutholi umphumela olindelekile, ngoba banakekelwa kahle nge-strawberries. Kodwa ukuhlukahluka ngalunye kudinga indlela eyakhe kanye nezimo ezithile zokuboshwa. Futhi i-strawberry "Lord" ayifani nale mithetho.
Izimpawu sitrobheli "uMarshal": ukutshala nokunakekelwa
Strawberry "Marshall" ingenye yezinhlobo ezinezithelo ezinkulu. Abalimi abaningi bakhetha izinhlobo ezinjalo zokuzalanisa, ngoba kungenzeka ukuvuna okuningi nakakhulu kusuka esihlahleni esisodwa kunokuba udlale amajikijolo amancane emahlathini amaningana. Indaba yokukhethwa kwezinhlobo ze-strawberries "iMarshal" Izinhlobonhlobo "uMarshal" - umphumela womsebenzi womzalisi waseMelika Marshall Yuell.
Izinzuzo nezindlela ezingcono kakhulu zokugaya ama-strawberries ebusika
I-Strawberry iwukuthi kufanele kube omunye wamajikijolo athandwa kakhulu. Inezinzuzo eziningi: ama-juicy, okuhlwabusayo, okunephunga elimnandi, amavithamini acebile, izakhi ezincane nezincane. Ama-Strawberries asekela ukukhulelwa kwengculazi (ikakhulukazi ewusizo kubantwana nasebekhulile). Inani elincane lama-kilojoule lenza le berry ikhangele ekudleni.
Indlela yokutshala ama-strawberry ekwindla
Ama-Strawberries, noma ama-strawberries - i-berry yasekuseni neyiphunga elimnandi - ethandwa yizingane kanye nabantu abadala. Ukufika kwehlobo kulindeleke, ikakhulukazi, ngenxa yento eningi yokudla nalokhu kudla. Ngaphandle kokunambitheka okukhulu, i-strawberry iphinde ilethe izinzuzo ezinkulu emzimbeni womuntu - iyimithombo yochungechunge lonke lamavithamini, izakhi zokulandelela kanye ne-fiber.
Strawberry "Asia": incazelo ehlukahlukene, ukulima kwe-agrotechnology
Izinhlobonhlobo ze-strawberry "i-Asia" ayikho indlela ehambisana nesifunda esikhulu kakhulu emhlabeni. Kwaxoshwa e-Italy ngo-2005. Izinhlobonhlobo sezikhule kahle emasimini ethu, futhi abalimi bayayithanda. I-Strawberry "i-Asia" inezimbangi nezinzuzo ezimbili, futhi kulesi sihloko uzothola incazelo yezinhlobonhlobo, kanye ne-agrotechnology yokulima kanye nezisekelo zokunakekelwa kwayo.
Izici zokusebenzisa okusanhlamvu okuhlobisayo ekwakhiweni komhlaba
Birch: nini futhi kanjani ukutshala, isicelo landscape design, ukunakekelwa
Amazambane abantu "Ladoshka": incazelo ezihlukahlukene, isithombe, isici
Izinhlobo ezihlukahlukene zucchini zokutshala emhlabathini ovulekile (ngesithombe)
Indlela yokukhulisa i-topinambur, ukutshala ikhasi eliphakathi kwezwe
Amakhowe asePoland: izici, izindawo zokuhlala, zokupheka
Izinhlobo zama-marigolds, incazelo kanye nesithombe sezinhlobo ezidumile
Strawberries Alexandria: umlando wokutshala, incazelo yezinhlobonhlobo nezici zokunakekelwa